Wararka - Sababaha loo Isticmaalayo Muujinta Kaartoonka
Milkiileyaal badan oo dukaamada tafaariiqda ah iyo dukaamada tafaariiqda ah ayaa adeegsada tusaalooyin alwaax ah si ay u soo bandhigaan wax soo saarkooda, laakiin isticmaalka kaararka boodhadhka baakadaha ayaa sidoo kale caan ku noqday.
Waxaad arki doontaa istaandarka iyo kartoonada la istcimaalayo inta lagu jiro bandhigyada ganacsiga iyo xitaa bannaanka dukaamo kala duwan oo ah goob lagu iibsado (POP). Haddii aad fureyso dukaan tafaariiq ah oo aad ka fikireyso nooca qalabka wax lagu soo bandhigo ee ay tahay inaad isticmaasho, halkan waxaa ku yaal dhowr sababood oo ah inaad ka fiirsato adeegsiga tusmooyinka kaartoonka ka sameysan kuwa alwaaxda ah: Waa noocyo kala duwan Mid ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee ku saabsan adeegsiga tusmooyinka kaarboorka ayaa ah kala duwanaanshaheeda. Waxaad dalban kartaa shaashad kartoon ah oo ku jirta dhammaan qaababka iyo cabbirka oo xitaa ku dar wax kasta oo naqshad ah oo aad rabto dhib la'aan. Iyadoo la tixgelinayo in kartoonka jiingadku yahay shey aad loola qabsan karo, waxaa loo samayn karaa si loo waafajiyo shuruudahaaga saxda ah waqtiga ugu yar ee suurtogalka ah. In kasta oo alwaax loo qaabeyn karo cabbirro kala duwan sidoo kale, geeddi-socodka ayaa kaliya lagu heli karaa aragti ahaan mashiinno shaqsi iyo qalab goyn ah ayaa loo baahan lahaa si loo abuuro sheyga ugu dambeeya. Nidaamka wax soosaarku ma aha oo kaliya dhib badan laakiin waa qaali qaali sidoo kale.
Waa la qaadan karaa haddii aad rabto inaad beddesho qaabka iyo muuqaalka dukaankaaga adoo wax wareegaya, kaligaa waad sameyn kartaa kaligaa maxaa yeelay bandhigyada jiingadku waa kuwo fudud oo la dhaqaajin karo. Markaad leedahay shaashado alwaax ah, waxaad u baahan tahay inaad caawimaad u kireysato mar kasta oo aad ka fikirto inaad beddesho dejinta dukaankaaga. Intaa waxaa sii dheer, maaddaama soo bandhigga miisaanka sare ee Abbotsford BC uu yahay mid la laaban karo, waxaad si fudud u kaydin kartaa ama u keeni kartaa meelo kale dallacsiin ama bandhigyo waddooyin ah.
Waa qiimo jaban Maadaama aad tahay milkiile ganacsi cusub, ma awoodi kartid inaad qarash badan ku bixiso bilowga. Bal qiyaas intee in le'eg oo shaashad alwaax ah ay ku kacayso oo ku dhufanayso tirada khaanadaha muujinta ama istaaga oo aad u baahan tahay. Bandhig sarre oo ka muuqda Abbotsford BC waa raqiis waxaana la siiyaa inay ficil ahaan u bixin karto wax kasta oo soo bandhigid alwaax ah ay bixin karto, iyada oo la adeegsanayo waxay noqon doontaa ikhtiyaarka ugu kharashka badan. Waa Laqabsasho Waxaad si fudud u beddeli kartaa naqshadda guud ee shaashadda kartoonnada si aad ugu habboonaato mawduuca dukaankaaga muddo cayiman xitaa iyadoo aan lagaa caawin xirfad-yaqaanno. Tusaale ahaan, inta lagu jiro iibinta maalinta jacaylka, waxaad ku dabooli kartaa dhammaan bandhigyadaada waraaqo casaan ah ama ku dar qaabab wadnaha garaafka ah oo ku habboon munaasabadda. Haddii aad isticmaasho bandhig alwaax ah, beddelkooda macnaheedu waa in aad shaqaaleyso caawimaad xirfadlayaal ah iyo kharash aad u badan.
Marka la eego faa'iidooyinka badan ee kor lagu sharaxay, waxaad si fudud ugu sheegi kartaa sida tusmooyinka kartoonada ay faa'iido ugu yeelan karaan ganacsigaaga. Ka fikir waxyaalahan oo dhan markii aad go aansato, si aanad u dareemin wax qoomamo ah aakhirka.